Tonizia: Fahatezerana manoloana ny didim-pitsarana italiana ho an’ireo Toniziana mpanamory fiaramanidina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2018 7:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, 简体中文, 繁體中文, English
Nosazian'ny fitsarana Italiana 10 taona an-tranomaizina ireo Toniziana roa mpanamory ny fiaramanidina Tuninter Flight 1153, izay nianjera tany an-dranomasin'i Sisily tamin'ny taona 2005 ary namoizana ain'olona 16. Notsipahin'ireo bilaogera Toniziana ny fanapahan-kevitra, izay nilaza fa tokony deraina ny ezaka mahery fo nataon'ireo mpanamory fiaramanidina tamin'ny fanavotana ireo mpandeha 23 hafa tao anatin'izany.
Some thoughts from Tunisia [Ar] mahita fanavakavahana tamin'ny didim-pitsarana ary nanoratra hoe:
Articuler [Fr], koa naneho fihetseham-po tahaka izany:
Tamin'ny Alatsinainy 23 Martsa, namoaka didim-pitsarana momba ny raharaha fianjeran'ny fiaramanidina ATR an'ny zotram-piaramanidina Toniziana, Tuninter ny fitsarana Italiana ao Parlemo. Henjana dia henjana ny didim-pitsarana navoakan'ny fitsarana Italiana ary hita fa sambany tokoa! Tsy mbola nisy teo aloha tompon'andraikitra amin'ny zotram-piaramanidina voasazy higadra. Amin'ny fanomezana sazy hatramin'ny 10 taona an-tranomaizina, nanasazy ireo Toniziana ny fitsarana Italiana araka ny fiheverana fa mamo izy ireo raha nitondra ny fiaramanidina. Koa mipetraka ny fanontaniana raha iharan'ny sazy henjana toy izany ny Italiana mamo eo am-panamoriana!